05/14/12 ~ ကြယ်ပွင့်မြို့တော်
11:42 AM ကြယ်လေး 1 comment
အမှတ်တရတွေ ဖြစ်သွားတော့ လဲ
ငါ့ ဘဝကိုအဆုံးသတ် စေမှန်း
ပြုစားတတ်တဲ့ အပြုံးတွေနဲ့ 
ဆော့ ကစားရက်ခဲ့ ပြီ။
မမြင်ဖူးတဲံသူစိမ်းတွေနဲ့ 
မင်းအလိုကျ ကစားပြခဲ့ ရပြီ။
ငါ့ နှလုံးသားမှာ အရှုံးများသာရလို့ 
11:31 AM ကြယ်လေး No comments
နှင်းဆီပန်းလေးတွေရဲ့ အရောင်အသွေးနဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေပါ။လူတွေ ဟာအချစ်နဲ့ပတ်သတ်လာရင် စိတ်ကူးယဉ်တက်ကျပါတယ်။ဒါဟာ လူ့သဘာဝဆိုတော့ မဆန်းတော့ပါဘူးဗျာ။ခုလဲ နှင်းဆီပန်းလေးတွေ အကြောင်းဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားရင် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။
နှင်းဆီပန်ရောင်............ပြီးပြည့်စုံသော ပျော်ရွှင်မှု။ အပြုံးတောက်ပမှု၊ ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပါ။
11:25 AM ကြယ်လေး No comments
ဒီ တစ်ခါ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး Gtalk Custom Massage အလန်းလေးတွေ စုစည်းပြီး တင်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
(တစ်ဆယ်) တစ်ဆယ်ကမ္ဘာ ချစ်သွားမယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ပေးလိုက်ပါကွာ။
အဲဒီခံစားမှုက ဘာနဲ့မှ မတူဘူး။
သူ့မျက်နှာကို နောက်ဆုံးမြင်ယောင်ပြီးမှ အိပ်စက်ခြင်းကို
ရောက်သလို သူ့မျက်နှာကို အရင်ဆုံးသတိရပြီးမှ နိုးထတဲ့အဖြစ်ဟာ
ကိုယ်ချစ်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေတယ်ဆိုရင်
ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး ဒီစကားကို ပြောလိုက်ပါတယ်။
မင်းကို ကိုယ် ခင်ချင်ပါတယ်။
Inter Net Connection တွေကောင်းတဲ့နေ့ကျမှ
မင်းကို ချစ်တယ်လို့ ရဲရဲကြီးဖွင့်ပြောပါ့မယ်နော်
ခုတော့ Connection ကောင်းတဲ့အထိစောင့်ပေးပါနော်။
ကဲ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပါပဲဗျာ။နောက်နေ့တွေ ကျွန်တော် ဒီလို Custom Massage အလန်းလေးတွေ ထပ်တင်ပေးပါ့မယ်ဗျာ။သူငယ်ချင်းတွေ ဖတ်ဖူးပြီးသားဆိုရင်လဲထပ်ပြီးအားပေးသွားပါဦးဗျာ။သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
11:09 AM ကြယ်လေး No comments
တစ်နေ့လုံး ဒီအတိုင်း Chat ချင်သည်…
အကြင်နာချစ်စကား ပြောခွင့်ပေးပါ အတည်….
သူ Block မှာလည်း စိုးရိမ်သည်….
သူ Sign Out မှာ သိပ်ကြောက်သည်…
အခုတော့သိပြီ သူ့ကို Q မိပြီ….။
Gtalk နဲ့ Chat မယ်…
G-mail နဲ့ Chat မယ်…
Facebook နဲ့ Chat မယ်.....
VZO နဲ့ Chat မယ်….
အဌာရသ ၁၈ ရပ်ကို
ဘိန်းမုန့်တောင် ဖုတ်ရောင်းလို့ မရဘူးမှတ်။
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အရာအားလုံးကို ကျောခိုင်းထားချင်တယ်။
မကြာခင်မှာ အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရလည်း ပြောင်းတော့မယ်…
ငါ့အချစ်တွေကတော့ ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အလွမ်းတွေကိုသာ ဆေးအဖြစ် သုတ်လို့ရမယ်ဆိုရင် ဒီကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာ မင်းကိုလွမ်းတဲ့ အလွမ်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
အာကာသထဲကနေ မင်းလှမ်းကြည့်တဲ့အခါ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ မင်းနာမည်ကိုတောင် မြင်တွေ့နိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့။
ကဲ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး ကြိုက်ကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဗျာ။သဘောကျရင် ယူသွားလိုက်ကျနော်။ကျွန်တော်က တော့ အရမ်းသဘောကျပါတယ်ဗျာ။နောက်ထပ် ဆက်ရန်တွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဗျာ။ဆက်လက် အားပေးကြပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါရစေဗျာ။
11:07 AM ကြယ်လေး No comments
အပြုံးတစ်ခုသည် သင့်ရုပ်ကို ပိုမိုလှပလာစေနိုင်သော
ငွေမကုန်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
ခေါင်းမော့လိုက်မှ... ကောင်းကင်ပေါ်က တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့
အခုအချိန်ဆို တတိယကမ္ဘာစစ်တောင် ဖြစ်နေလောက်ပြီ....။
ကဲ သူငယ်ချင်းတွေ သဘောကျရင် နောက်ထပ် Post လေးတွေကိုလဲ ဆက်လက်ဖတ်ရှုအားပေးသွားပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါရစေဗျာ။သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်။
11:00 AM ကြယ်လေး No comments
လမင်းရယ်၊ ကြယ်ရယ် မလိုပါဘူး။
မင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရောက်လို့ကတော့ ကောက်ညှင်းအစာသွတ်ပြီး ချက်စားပစ်မယ်။
ငါ့အမေက ပင်လယ်စာ မညှီအောင် ချက်တတ်တယ်ကွ။
အပြောင်းအလဲကြီးမှာ ခံနိုင်ရည် ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကဲ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။နောက် Post တွေကိုလဲ အားပေးသွားပါဦးနော်။
10:34 AM ကြယ်လေး No comments
နေ့ စဉ် ညဆက်
10:32 AM ကြယ်လေး No comments
တွေ့ မိသူ ဒီလူရင်မှာ
ရင်ခုန်သံ စည်းချက်မမှန်တော့ ပဲ
ခွင့် မတောင်းပဲ ဝင်ရောက်ခဲ့ တယ်
အထပ်ထပ် မက်လို့ 
မျှော်လင့် ခြင်း မနက်ဖြန်တွေ အသက်ဆက်ခဲ့ ပြီ။
ကောင်းကင်က ကြွေကျမလာပေမဲ့ 
သူမဟာ ထွန်းတောက်နေတဲ့ကြယ်တစ်စင်းပါ။
10:10 AM ကြယ်လေး No comments
ဒီ တစ်ခါတော့ ကျွန်တော်က သူငယ်ချင်းတွေ နည်းပညာချည်းလေ့လာနေရတာ ပျင်းနေကြပြီပေါ့ဗျာ။တစ်ခါတစ်လေကျတော့ လဲ ကျွန်တော်တို့ တွေရဲ့ ဦးနှောက်လေးကို ဆေးတဲ့ အနေနဲ့ ပျော်စရာရွှင်စရာ ဟာသလေးတွေကို ကျွန်တော်ကရေးပြီး သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် လက်ဆောင်လေးပေးပါရစေဗျာ။သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရောင်းတဲ့ ကလေးစွပ်ပြုတ်တဲ့ဗျာ ကြည့်ကြပါဦး။
9:45 AM ကြယ်လေး No comments
ကျွန်တော် ဒီ Post လေးကို မတင်ခင် ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ရင်းနဲ့တင် တော်တော်ကြီးကိုဝမ်းနည်းမိပါတယ်ဗျာ။သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးလဲ ကြည့်ပြီး ခံစားကြည့်ပေးကြပါဦးဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တရုတ်လူမျိုးအချို့ဟာ လိင်အားတိုးဆေးဆိုပြီး ကလေးငယ်လေးတွေကို စွပ်ပြုတ်လုပ်သောက်ကြပါတယ်.....ဒီသတင်းဟာ ကမ္ဘာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကို တုန်လှုပ်ချောက်ခြားစေခဲ့တာ အမှန်ပါ.....
ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်နေတဲ့ စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာပုံတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ကန်တန် (Canton) ခရိုင်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ မြို့တစ်မြို့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်....ဒီကလေးစွပ်ပြုတ်ဟာ ကျန်းမာခြင်း၊ သက်လုံကောင်းခြင်း၊ အထူးသဖြင့် လိင်အားတိုးခြင်းကို ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်...
ဈေးနှုန်းကတော့ ဒေါ်လာ(၄,၀၀၀) ခန့် ရှိပါတယ်တဲ့....
၀ယ်သူစားသုံးနေကျဖောက်သည်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စက်ရုံမန်နေဂျာတစ်ယောက်ကတော့ ဒီလူဆေးစွပ်ပြုတ်ဟာ ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ အင်တာဗျူးမှာ အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်....
အဲဒီစွပ်ပြုတ်ရဖို့အတွက် အဖိုးတန်ဆေးဖက်ဝင် ပစ္စည်းတွေအပါအ၀င် ကြက်သားနဲ့ရောပြီး ကလေးငယ်ကို ၈ နာရီကြာ ရေနွေးနဲ့ပွက်ပွက်ဆူအောင် ပြုတ်ရပါတယ်....
အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ စက်ရုံမန်နေဂျာက သူ့ရဲ့ ၁၉ နှစ်အရွယ် ဒုတိယမယားငယ်ကို လက်ညှိးထိုးပြပြီး သူတို့ဟာ နေ့စဉ် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အကြောင်း (မရှက်မကြောက်) သတင်းထောက်ကို ပြောပြပါတယ်....
ဒီပုံမှာတွေ့တဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ မိဘတွေဟာ သမီးမိန်းကလေး ၂ ယောက်ရှိထားပြီး... တတိယကိုယ်ဝန်ဟာလည်း သမီးမိန်းကလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကိုယ်ဝန် ၅ လအရွယ်မှာ ဖျက်ချဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး.....အဲဒီလိုဖျက်ချတာဟာ ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်....ဖျက်ချတာမဟုတ်ပဲ မွေးလပြည့်ခါနီးဖြစ်တဲ့ကလေးတွေ သဘာဝအတိုင်းသေမယ်ဆိုရင် တရုတ်ယွမ်းငွေ (၂၀၀၀)လောက် ကုန်ကျပြီး....တမင်သက်သက် ဖျက်ချမယ်ဆိုရင်တော့ ရာဂဏန်းအနည်းငယ်လောက်သာ ကုန်ကျမယ်တဲ့...
ဒေသခံသတင်းထောက် တစ်ယောက်ကတော့ ဒီပြသနာတွေဟာ တရုတ်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အရမ်းအာရုံစူးစိုက်လွန်းလို့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပြသနာတွေဖြစ်ပြီး..... မိသားစုတစုမှာ ကလေးတယောက်သာ ယူရမယ်ဆိုတဲ့ တရုတ်အစိုးရပေါ်လစီရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုရလဒ်တွေလည်း ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်.....
ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့ တရုတ်အများစုကတော့ ကလေးအသားတွေ စားရတာကို သဘောတွေ့ကြပြီး....မရှိဆင်းရဲသားမိဘတွေကတော့ ငွေကြေးအတွက် သူတို့ရဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ရောင်းလိုရောင်း.....ဒီလိုနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာနေတာ အမှန်ပါ....
နောက်တခုက...စားသောက်ဖွယ်ရာတွေလုပ်ဖို့အတွက် ကလေးအသေတွေကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၀)နဲ့ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာ ၀ယ်လို့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်.....
ဘယ်နည်းမဆိုပါ.....နီဂုံးချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့....ဇာတ်တူသားစားတဲ့ ဟင်္သာ(၉)သောင်းနဲ့ ပင့်ကူ ဇာတ်လမ်းသစ်ကြီးကို တရုတ်နိုင်ငံမှာ မကြာခင် ရှုစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.....
ဒီပုံ အတိုင်း သူတို့ စွပ်ပြုတ်လုပ်သောက်ကြတာလေ။မိုက်ရိုင်းလိုက်ကြတာ ဗျာ။
ကလေးလေး ကိုယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ မသန့်တာတွေ ကို ဖယ်ရှားဖို့ လုပ်နေကြတာလေ။
ဒီ ပုံထဲက အတိုင်း ကလေးလေး ကိုရေနွေးပွတ်ပွတ်ဆူတဲ့ အထဲကို ထည်ပြီး 8 နာရီကြာ ပြုတ်ကြတာလေ။ဘယ်လောက် စက်ဆုပ်ရွှံစရာကောင်းကြလဲ ဗျာ။
ဒီ ပုံလေးကတော့ သူတို့တရုတ်တွေရဲ့ ဆေးပေါင်းစုံနဲ့ ကလေးလေးကို စွပ်ပြုတ်လုပ်ဖို့ အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့ ပုံလေးပါ။
ဒီပုံလေး ကတော့ ကလေးလေးကို ဓားနဲ့ ခွဲပြီး စွပ်ပြုတ်လုပ်ဖို့ အတွက်ပုံလေးပါ။
ဒီ ပုံလေးကတော့ ကလေးလေးကို အရက်နဲ့ သန့်စင်အောင် ဆေးနေတဲ့ ပုံလေးပါ။
ဒီ ပုံလေးဆို အနီးကပ်မြင်ရတဲ့ အတွက် သူငယ်ချင်းတွေ ရင်ထဲမှာ ဘယ်လို ခံစားရမလဲဗျာ။အပြစ်မရှိဘဲ ဖြူစင်တဲ့ ကလေးလေးတွေကို သူတို့ ဘာလို့ အဲ့လောက်လုပ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ဖြင့်နားမလည်နိုင်ဘူးဗျာ။ကြင်နာတက်တဲ့ အသည်းနှလုံးမရှိလိုက်တဲ့ သူတွေဗျာ။
အပြစ်မရှိဘဲ ဖြူစင်ပြီး နူးညံ့လှတဲ့ ကလေးလေး တွေကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကြင်နာကြပါ သနားညှာတာကြပါ။လူသားချင်း စာနာကြပါလို့ ကျွန်တော်က ပြောပါရစေဗျာ။
From - The Seoul Times